सन्दर्भ- गोर्खालेण्ड आन्दोलन !!! – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
सन्दर्भ- गोर्खालेण्ड आन्दोलन !!!
Jun 24, 2017 Article
गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली एकीकरण गर्नको लागि गोर्खा सैनिक निर्माण गरेका थिए । ति बिर गोर्खाली सेनाले बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर अन्तमा ग्रेटर नेपाल बनाएका थिए । यो क्रम बहादुर शाह सम्म चल्यो । एकीकरण गरिरहेकै बेला भारतमा अंग्रेजले आफ्नो सामराज्य बिस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा आक्रमण गर्यो । नेपाली गोर्खा सेनासंग आमना सामना गरिरहदा अंग्रेजले धेरै क्षति व्यहोर्न पर्यो । बिना आधुनिक हतियार बिना दाना पानि डटेर अंग्रेजसंग लडे । किल्ला कांगडा होस् वा टिष्टा र तिब्बत होस् उनीहरुको विरताले संसारले चिन्यो । अंग्रेजले कुटनैतिक हिसाबले सुगौली सन्धि गरेर नेपाल भूमिलाई साँघुरो बनाएर राख्यो । त्यतिखेर दार्जलिङ नेपालबाट इष्ट इन्डिया कम्पनीमा गाभिन पुगेको थियो । अंग्रेजले संसार जित्नु थियो । उसको नजर गोर्खा सैनिक तर्फ थियो र नेपालि बिरहरुको लागि गोर्खा भर्ति केन्द्रको स्थापना गर्यो । त्यहि गोर्खा भर्ति केन्द्रले छाती नापि, नापीकन आफ्नो सैनिकमा नेपाली बटालैन खडा गरेर
जहा अफ्ठ्यारो पर्यो त्यहि गोर्खापल्टन लाइ पठाउथ्यो । धेरै बिरचक्रहरू नेपालि गोर्खा सैनिकले पाएका छन् । यो बिर गोर्खालीको इतिहास घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यो बिरगोर्खा भन्ने शब्द नेपालीहरुले कमाएको पदवी र नाम हो । अर्थात नेपालको गोर्खा जिल्लाको नामबाट बनेको र गोरखामा गोरख काली भगवतीको मन्दिर भएकोले त्यहा बस्ने बासिन्दालाइ गोऱखाली भनिएको हो ।
दार्जलिङ्गका भारतीयले दार्जलिङ्गलाइ गोर्खालेण्ड नाम राख्ने कुनै अधिकार छैन । उनीहरु भारतीय नेपालि हुम भन्न नसक्ने र नेपाल र नेपालिलाइ होच्याउने कुरा गर्ने अधिकार पनि छैन । नेपालीहरुको सहानुभूतिलाई अपमान गरिराखेका छन् । त्यो दार्जलिंगे नेपालीभाषीहरुको दुर्भाग्य हो । गोर्खालेण्ड बनाउछु भन्ने नै षड्यन्त्र हो त्यहाका जनतालाइ बिना कारण मराउनु हो । यो नामबाट कुनै हालतमा प्रान्त बन्न सक्दैन । त्यति सानो ठाउमा दश दश वटा पार्टी खोलिएको छ । नेपालीहरुलाई जतिखेर पनि फुटाउन र किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा भारतलाइ राम्ररि थाहा छ ।
नेपाली भाषी दार्जलिंगेहरु गोर्खाली होइनन भन्न त मिल्दैन तर दार्जलिंग भारतको सिमा भित्र परेपछि उनीहरुको पहिचान जोगाउन गारो भएको भने पक्कै हो । यो कुरा ध्रुब सत्य हो । भलै इतिहासमा दार्जलिंग नेपालको भू भागमा पर्थ्यो । सुगौली सन्धि पछि इष्ट इन्डिया कम्पनि परेको हो । अहिलेको भारतमा सयौ राज्य थिए । अंग्रेजले एकीकृत गरिदियो । सबै जनताले मिलेर अंग्रेजलाई धपाउन सके र नेपाल भन्दा धेरै सानो भारत बंशीय हस्तिनापुरको राज्यको नाममा बृहत राज्य बन्न पुग्यो, भारत । नेपाल र नेपालका शासकले सुगौली सन्धिमा गुमेका भुमि अङ्ग्रेजबाट लिन सकेन वा माग्न सकेन, वा चाहेन । सत्ता स्वार्थमा हुदा नेपालि शासकले इतिहासिक भुल र देस घाती सन्धि गरिरहेको हामीले देखेकै छौ । सत्ता स्वार्थको कारणले राणाशाहिहरुले अङ्ग्रेजसंग नेपालको भुमि फिर्ता दिन चाहदा पनि नेपालले नलिएको भन्ने कुरा सुनेका र पढेका पनि छौ ।
दार्जलिङ्गमा गोर्खालेण्ड स्थापना लागि भएको आन्दोलन अहिले ह्वातै भाइरल भएको छ । एउटा अन्तरबार्तामा दार्जलिंगे नेपालि भाषी एक नेता र एक आध व्यक्तिले हामि नेपालि होइनौ, हामि भारती हौ र हामि त गोर्खा हौ भन्दैछन् । नेपालसंग गाभिन चाहदैनौ, नेपाल जस्तो गरिब देशसंग मिसिने कुरै छैन । नेपालीहरु भारतमा भाडा माजंन आउछन । एक आध जनाले नेपाल र नेपाली प्रति नराम्रो धारणा राखे पनि समग्र दार्जलिंग्का नेपालि दाजुभाइ त्यसो भनेका छैनन । एकै घानमा राखेर उनीहरु प्रति दुर्भावना राख्नु मनासिब देखिदैन । नेपालका नेपालीहरुले दार्जिलिङ्गको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् सहानुभूति राखेका छन् । भारत सरकारले दार्जलिङ्गका नेपालिभाषी जनतालाई बर्बर दमन गरेको छन् । दार्जलिङ्गमा नेपालि भाषामा स्कुल कलेजमा पढाइ राखेका थिए पनि, भारतको सम्बिधानमा पनि मान्यता दीएको थियो । बङ्गाल सरकारले नेपालि भाषालाइ बन्देज लगाए पछि गोर्खालेण्ड छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलित छन् उनीहरु !
दार्जलिङ्गलाइ गोर्खालेण्ड नाम राख्नु नै षड्यन्त्र थियो । दार्जलिंगेले बुझेनन् । गोर्खालेण्ड नेपाललाई देखाएर नेपालीको संगलग्नता हो भनेर भारत सरकारले जहिले पनि दबाउन सक्छन र त्यो आरोप लागिरहंछ । त्यसैले यो गोर्खालेंड कहिल्यै बन्न सक्दैन ।
कथम कदाचित बनिहाले पनि नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ !! नेपालीको शान, गोर्खाली बिर नेपालीको इतिहास मेटिन सक्छ ! गोर्खाली जति भारतीय हुन् भनेर बिश्व सामु चिच्याउदै हिडने छ भारत । भगवान गौतम बुध्द भारतको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन्, भन्ने भारतीय शासकले बिरगोर्खा हमारा है, नेपाल हमारा गोर्खालैंड मे पड़ता है । भनेर बिश्व सामु पनि नेपालीको अस्तित्व धराशाही बनाउन कोशिस गर्ने छन् । फेरी नेपालीले गोर्खालेण्ड भारतको स्टेट हो नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो भनेर स्पष्टीकारण दिदै हिन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले दार्जलिंग गोर्खालेन्ड होइन ? त्यहा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी जनताले गोरखाको इतिहास मेटाउन खोजेका छन् जानेर वा नजानेर । यो कदापी एउटा सच्चा नेपालीलाई सह्य हुने कुरा होइन । बिर गोर्खालीको पदवी नेपाली बिरहरुले प्राप्त गरेको हो । दार्जलिंगे नेपालीले होइन । हिम्मत छ भने नेपालले गुमाएको भूभाग हामीलाई चाहिन्छ भनि माग । नेपाली भाषिक दार्जलिङ्ग प्रान्तको माग राख । अझ भन्ने हो सन् १९५० को सन्धिले सुगौली सन्धि खारेज गरेको छ त्यो हिसाबले त दार्जलिङ्ग नेपालकै भुमि हो । सिक्किममा नेपालि बोल्छन नेपालि भाषा पढाइञ्छ र बोलीचाली पनि नेपालि छ । दार्जलिंगलाई किन गोर्खा शब्द नै चाहियो ? यो भारतीहरुको षडयन्त्र हो, भन्ने मलाइ लाग्छ । गोर्खा लेण्डको माग राखि आन्दोलन गरिरहदा बिदेसिको घुसपेठ हो, यी सबै नेपालि हुन, यी त भरिया र कामदार मात्रहुन भनेर दार्जलिङ्गका जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरि बर्बरता पुर्बक आन्दोलनलाई सदियौ देखि दबाइएको छ । तपाइहरुको संघर्षले सफलता पाओस । हामि यहि कामना गर्दछौ ।
भुटानी नेपालीजस्तै दार्जलिंगे नेपालीहरु नेपालमा शरणार्थी भएको देख्न नपरोस ।
तर पनि संसारका नेपालीभाषीहरुलाई बर्बर अत्याचार हुदा कुन नेपालीको मन रुन्न होला ? सहानुभुती छ, तपाइहरुको आन्दोलनलाई तर गोर्खालेण्ड होइन दार्जलिंग प्रान्तको लागि !!!
तपाइहरुको संघर्षले सफलता पाओस !!!
लेख: सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
ज्याक्सन हाइट अपार्टमेन्ट फाइभ बि